Rio Rancho, NM (September 24, 2020) – Lectrosonics is pleased to announce the introduction of the DCHR miniature stereo digital receiver. The DCHR isaminiature, portable digital receiver capable of stereo or mono operation fromasingle RF carrier with Lectrosonics digital transmitters including the DCHT, M2T, DBu, DHu, and DPR. The unit tunes from 470-614 MHz in the ...
MOUNTAIN VIEW, CA – September 23, 2020 – TVU Networks, the market and technology leader in cloud and IP-based live video solutions, today announced the California Governor’s Office of Emergency Services (Cal OES) has purchasedacomplete TVU live video solution, which includesaTVU One transmitter, TVU Transceiver and TVU Grid. Cal OES has been able to provide pool ...
နောက်ဆုံးနှင့် Firmware Facebook နှင့် YouTube တို့အတွက်အထူးလွယ်ကူသည့်တည်ဆောက်မှုကိုထည့်သွင်းထားသည်။ WAYNE, NJ၊ စက်တင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၂၀ - JVCKENWOOD USA Corporation ၏ဌာနခွဲ JVC Professional Video သည်၎င်း၏လူမှုကွန်ယက်များဖြစ်သော၎င်း၏လူမှုကွန်ယက်များဖြစ်သော CONNECTED CAM ™ 23- နှင့် 2020-Series ကင်မရာများတွင်ပါ ၀ င်သည်။ firmware ကိုမွမ်းမံခြင်း ပထမဆုံးကင်မရာထုတ်လုပ်သူအနေဖြင့်ကင်မရာမှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးသော JVC ၏ 500-Series ကင်မရာများတွင် SNS ဗီဒီယိုလွှင့်ခြင်းများပါ ၀ င်သည်။
Nartan မှတ်တမ်းများသည် streaming standard များအားလုံးကိုကိုက်ညီစေရန်နဂိုအသံကိုဖန်တီးရန် NUGEN ၏ SEQ-S, MasterCheck, AB, ISL နှင့် LM-Correct Solutions များကိုအသုံးပြုသည်။ MILAN, စက်တင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၂၀ - အီတလီ၊ တောင်ပိုင်း Tyrol၊ အီတလီ၊ တောင်ပိုင်း၊ Tyrol၊ ဂီတပညာရှင်နှင့်တေးရေးဆရာ Nartan Savona ကပိုင်ဆိုင်ပြီးလည်ပတ်နေသည့်လွတ်လပ်သောအသံတံဆိပ်နှင့်အသံသွင်းစတူဒီယို။ Nartan မှတ်တမ်း၏အဓိက client base မှာ ...
1 ၏စာမျက်နှာ 2,37412345 » 102030...နောက်ဆုံး»